Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Xukuumada Soomaaliya ayaa soo saartay isku aadka tartanka maamul goboleedyada dalka oo 7-da bishan ka furmaya magaalada Muqisho.
Isku aadka ayaa wuxuu ka koobanyahay 2 horin oo kala ah A iyo B, iyadoo horin waliba wada galay 3 kooxood maadaama tartanka ay ka qeyb galayaan 6 kooxood.
Horinta koowaad ee A ayaa waxaa nasiib u yeeshay in ay wada galaan kooxaha Jubbland, Banaadir iyo Galmudug oo sanadkii la soo dhaafay tartankan qeybaha dhexe lagu reebay.
Horinta labaad ee B ayaa waxaa wada galay kooxaha Hishabeelle, Koonfur Galbeed iyo Puntland oo tartankan difaacneysa isla markaana sanadkii hore ka adkaatay ciyaartooydii matalayay maamulka Jubbaland.
Magaalada Muqdisho ayaa sanadkii labaad oo xiriir ah marti galineysa dhacdo ciyaareedkan oo ah mid aad u xiisa badan waxaa horay lagu madalsanaa in tartanka sanadkan uu ka furmo magaalada Kismaayo laakiin suurtagali waysay.
Waxay ka dambaysay arintan markii Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha mamaulka Jubbaland ay sheegtay in Kismaayo aysan u diyaarsaneyn marti galinta tartankan, sidaasi darteedna codsatay in lagu qabto magaalada Muqdisho.
Tartanka maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa in todobaadkan uu ka furmo magaalada Muqdisho waxaana kulanka ugu horeeya ee tartanka sanadkan foodda is dari doona Ciyaartooyda Banaadir iyo kuwa Jubbaland
Akhriso Sida ay isugu beegmaan Kooxaha Kubadda cagta ee maamulada.
Guruub A: Jubbaland, Banaadir iyo Galmudug
Gurub B: Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Puntand.
Kulanka ugu horeeyay waxaa la filayaa inay ciyaaraan Kooxaha Banaadir iyo Jubbaland maalinta Jimcaha ee soo socota.